5 Yakanakisa Pikicha Spot MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Yakanakisa Pikicha Spot MuEurope
Kunyangwe iwe uchifamba kwevhiki kana zororo refu muEurope, unofanira kugara uchiita nguva yekuzorora. Iyo pikicha inzira inoshamisa yekuzorora uye kuyemura mamwe eanongedzera nzvimbo uye maonero. saka, kukubatsira kuti utange kuzororo rako reEurope, takabata neruoko uye takarongedza dengu rePikoto yeiyo yakanakisa pikicha muEurope. Ingogara kumashure, uye unakirwe nemaonero acho!
1. Pikicha In Petrin Chikomo, Prague
Maonero nemamiriro ekunze muPetrin Hill park inogadzira imwe ye 5 yakanakisa pikiniki nzvimbo muEurope. Sezvineiwo, iri muChidiki Town, Petrin Hill inzvimbo yakasvibira uye inodakadza iyo inotarisisa Prague castle. Petrin anopa maonero akanakisa eruzhinji, uye waigona kukwira kune shongwe yekutarisira ye maonero anoshamisa muguta, nematende, uye mabhiriji.
Petrin Chikomo akakodzera pikiniki muEurope muchirimo, kudonha kana zhizha. Mashizha acho anotarisa zvakakwana kupera simba mukudonha uye muchirimo uye zhizha miti yese nenyika zvichave zvichitumbuka uye zvicheneke mutema. Ingozvibata iwe wega ma scones nemajeriki kubva Zvinyorwa Bakehouse uye imi mese makagadzirirwa pikiniki inoshamisa muPrague.
Nzira yekuenda kuna Petrin Chikomo?
Petrin Chikomo chiri mhiri kweiyo Old Town uye guta. Unogona kufamba nekunakidzwa, tramu kana bhazi, sevashanyi vese. asi, unogona kusvika kuna Petrin Chikomo netsoka, kuyambuka Charles Bridge kuenda kuMala Strana uye Lennon madziro. Zvinokutora iwe kana awa kana mamiriro ekunze akanaka uye pikicha yekuvira kwezuva ichave iri magumo kuzuva rino reroto muguta.
2. Pikiniki Pah Chi river In Saxon Switzerland, Jerimani
Nzizi huru, pamberi pechando, Nzvimbo dzakasvibirira dzakakukomberedza, Saxon Switzerland paki yenyika inoshamisa paradhiso. Mangwanani ane usimbe kana kumagumo kwa kufamba kwenguva refu, iyo Bastei bhiriji ndiyo yakanaka nzvimbo yepikisiki inoshamisa.
Kana iwe uri mune adventures uye anokwira mudiwa anofarira, iwe zvechokwadi uchafarira kutora zororo yepikiniki. Pane rimwe divi, kana iwe uchida kugara kwakanaka uye kuzorora, iyo pikicha parwizi muSaxon Switzerland ichakwira zororo rako rose reEurope.
Nzira yekuenda KuSaxon Switzerland?
Saxon Switzerland ndeye chete 30 mamineti 'kufamba kwechitima kubva kuDresden. saka, rongedza Eierschecke, kofi, ma berries, uye michero kubva pamusika wemuno uye mese maiswa kune imwe nguva huru mune imwe inonakidza nzvimbo yepikicha muEurope.
3. Picnic Yakao Nyanza MuLago Di Braies, Itari
Bhuronzi pristine mvura uye pamusoro pegomo inoratidzira mune dziva, maonero eLake di Braies muSouth Tyrol muItaly anozopenda pikicha yako nekuyeuka kwakanaka. Italy idenga rekumusoro, kubatanidzwa ne Nyanza dzinoshamisa uye makomo, Hazvina kukodzera kunyatsotsanangura pamusoro pezvikonzero zvakawanda nei iri dziva riri pamusoro pedu 5 yakanakisa pikiniki nzvimbo muEurope.
Kana iwe uine shungu mukufamba munzira muDolomites, iyo dunhu lago di Braie zuva-hike zviri nyore. saka, iwe unopedza zuva rinoshamisa mune zvakasikwa, kutora kuruma kubva kuPanini yako kana pitsa uye kuyemura maonero egungwa rakakura kwazvo repanyama muDolomites.
Ndinosvika Sei KuLago Di Braie?
Lago di Braies chitima kufamba kubva Bolzano, iro guta riri pedyo. Zvinotora inenge awa nechitima, kana iwe unogona kuwana pekugara inoshamisa padyo.
Milan kuenda kuVenice neTreni
Padua kuenda kuVenice neTreni
Bologna kuenda kuVenice neTreni
Roma kuenda kuVenice neTreni
4. Pikicha PaChitsuwa MuMargret Island, Budapest
Inowanikwa parwizi rweDanube, pakati peBuda nePest, Margaret Island yakanakira yepikiniki pikiniki muBudapest. Chitsuwa ichi 2.5 ? km, anodiwa pakati peanowanikwa munzvimbo dzekunakidzwa kwekunze muzuva. Pamusoro pe, pane musika wemuno pedyo, saka hapana chikonzero chekutakura mapikiniki ako ekubata kubva kuguta nezvifambiso zvevoruzhinji. Iwe unongobata zvido zvako zvese uye mashoma emakanzuru emusika pamusika woenda kuchitsuwa.
Kune zvakare munda weJapan pachiwi cheMargaret icho chakakodzera kushanyirwa isati yasvika kana shure kwepikiniki yako yakanaka.
Ndinosvika Sei kuMargaret Island?
Ne tramu kana bhazi, Margaret chitsuwa chinowanikwa kwazvo neyekutakura vanhu. Pfungwa yomukati: Budapest Kadhi inowana iwe yakakosha yekuwedzera kune yeruzhinji yekufambisa uye zvinokwezva.
Paris ine magadheni akanaka kwazvo asingaverengeki uye epikiniki nzvimbo pedyo neSeine. Nzvimbo yakanaka yepikiniki muParis iri mhiri kwechi iconic Champs de Mars nzvimbo.
Iwo unoshamisa nzvimbo yakasvibira pakati pechinomwe kurongedzerwa uye Eiffel Tower. Iyo yakanakira pikiniki muParis uye inopa zvigaro zvepamusoro zvekuvira kwezuva. Mukuwedzera kune chimiro, zvakare imwe ye 10 maonero akanakisa paEiffel Tower muParis.
Nguva imwe neimwe yezhizha mhuri dzeParisian dzinosvika kuzotora zuva kana kunakirwa nemamiriro ekunze kwebindu. Yakanyanya runyararo uye inopa chinzvimbo chakanaka chekutarisa Eiffel Tower husiku marambi.
saka, ave nechokwadi chekutakura nyowani baguette, camembert, muchero mutsva, waini, uye musoro kune imwe yeakanakisa pikiniki nzvimbo muEurope.
Sei Kuuya Kwamakwikwi De Mars Gardens?
Unogona kutora metro kana RER chitima. Ingoburuka paChamp de Mars-Tour Eiffel chiteshi.
Kufamba kunogona kunetsa uye kunetesa nekuti isu tichagara tichida kuona uye kuona zvakazara zvese. Europe ine zvakawanda zvinoshamisa uye zvisingakanganwike zviitiko uye maonero ekupa. Nepo iwe uchifanira kugara uchiedza kuti uone zvakanyanya sezvinobvira, dzimwe nguva unongoda kutora nyore. Kuve nepikiniki nezvinonaka zvemunharaunda inzira inonakidza yekuongorora nyika uye chikafu, pasina kuita nhanho.
Amsterdam kuenda kuParis neTreni
London kuenda kuParis neTreni
Rotterdam kuenda kuParis neTreni
Brussels kuParis neTreni
pano pa Save A Train, isu tichafara kukubatsira iwe kuwana zvakachipa zvetiketi matikiti kune chero akaisvonaka epikicha nzvimbo pane yedu runyorwa.
Iwe unoda here kubatisa blog yedu yekunyora "5 Best picnic Spot In Europe" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/best-picnic-spots-europe/ ‎– (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)